Macluumaadka Shirkadda - Newsway Valve Co., Ltd.
KU SAABSAN Newsways Madax
Newsway Valve CO., LTD waa shirkad soosaarayaasha warshadaha soo saarta isla markaana dhoofisa in ka badan 20 sano taariikh, waxayna leedahay 20,000㎡ aqoon isweydaarsi daboolan. Waxaan diiradda saarnaa naqshadeynta, horumarinta, soosaarka. Newsway Valve waa kuwo si adag u waafaqsan nidaamka tayada caalamiga ah ee heerka ISO9001 ee wax soo saar. Wax soo saarkeenu wuxuu hayaa nidaamyo naqshadaysan oo kombiyuutar lagu caawiyo iyo qalab kumbuyuutar casri ah oo wax soo saar, soo saarid iyo tijaabin ah. Waxaan leenahay koox kormeer ah si aan u xakameyno tayada filtarka si adag, kooxdayada kormeerka waxay kormeeraan qalabka ka soo baxa marka ugu horeysa illaa xirmada ugu dambeysa, waxay kormeeraan hanaan kasta oo wax soo saar ah. Waxaan sidoo kale lashaqeyneynaa waaxda kormeerka seddexaad si aan uga caawinno macaamiisheenna inay kormeeraan qalabka lagu xiro ka hor rarka.
Waxaan ku takhasusay fureyaasha kubbadda, filtarka albaabka, jeegaga lagu baaro, wiishka adduunka, qalabyada balanbaalis, furayaasha fur, fiiqfurka, kontoroolada xakamaynta. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa WCB / A105, WCC, LCB, CF8 / F304, CF8M / F316, CF3, CF3, F4A, F5A, F11, F22, F51 HASTALLOY, MONEL, ALUMINUM ALLOY iwm Xajmiga cabirka oo ka socda 1/4 inji (8 MM) ilaa 80 inji (2000MM). Farsamooyinkayaga ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa Saliida iyo Gaaska, Soosaarka Batroolka, Kiimikada iyo Kiimikada, Biyaha iyo Biyaha Wast, Daaweynta Biyaha, Macdanta, Badda, Awoodda, Warshadaha saxarka iyo Waraaqaha, Cryogenics, Upstream.
Faa'iidooyinka iyo ujeedooyinka
Newsway Valve aad baa looga mahadceliyaa gudaha iyo dibaddaba. In kasta oo maalmahan uu jiro tartan adag suuqa dhexdiisa, NEWSWAY VALVE waxay heshaa horumar joogto ah oo hufan oo ay hagto mabda'ayada maaraynta, taas oo ah, oo ay hagayso sayniska & teknolojiyada, oo ay damaanad qaaday tayada, u hogaansanaanta daacadnimada iyo bartilmaameedka adeegga ugu fiican .
Waxaan ku adkeyneynaa raadinta heer sare, waxaan ku dadaalnaa inaan dhisno sumadda Newsway. Dadaal weyn ayaa la sameyn doonaa si loo gaaro horumar guud iyo horumar dhammaantiin.